Arteta oo shaaca ka qaaday go’aanka kooxda Arsenal kaddib soo laabashada Aubameyang – Gool FM
(London) 19 Jan 2022. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa qirtay in ayna kooxda ka helin sharaxaad saraakiisha Gabon, ee ku saabsan sababta uu Pierre-Emerick Aubameyang ugu soo laabtay kooxda kaddib markii uu ku guul daraystay inuu xulkiisa kala qayb galo ciyaaraha qaramada Afrika.
Wargeysyada Ingariiska ayaa horey u sheegay inuu jiro jahawareer ku saabsan xaaladda, iyadoo kooxda reer London aysan xilligan fileynin soo laabashada weeraryahanka Gabon, gaar ahaan maadaama uu xulkiisa mar hore u soo baxday wareegga xiga ee tartanka qaramada Afrika ee hadda ka socda Cameroon.
Tababaraha reer Spain ayaa shaaca ka qaaday in Aubameyang uu haatan mari doono baaritaano badan si loo ogaado xaaladiisa caafimaad, iyo in lagu ogaado dhibaatooyinka caafimaad ee laga yaabo inay caqabad ku noqdeen ka qeyb galkiisa koobka qaramada Afrika.
Tababaraha Gabon Patrice Neveu ayaa sheegay in Arsenal ay cadaadis ku saartay xiriirka kubadda cagta maxalliga ah in Aubameyang dib loogu soo celiyo England kaddib markii ay ka baxeen in uu ku dhaco caabuqa Korona Fayras.
Haddaba tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta oo ka hadlayay xaaladda Pierre-Emerick Aubameyang, ayaa wuxuu yiri:
“Waa waajib naga saaran inaan hubinno in Aubameyang uu nabad qabo oo xaaladiisu wanaagsan tahay.”
“Wax dhibaato ah kuma qabin wixii aan u samaynay ciyaaryahanka.”
Si kastaba ha ahaatee, tababaraha Gunners ma cadda inuu ku tiirsanaan doono Aubameyang kaddib markii laga qaaday kabtanimada isla markaana uu ka saaray qorshihiisa sababa la xiriira hab dhaqankiisa.